Mushambadzi Eisai wekubvisa uremu zvinodhaka Belviq mushure mekuedzwa kuwana kenza yekubatanidza - Tamban RELAY
FDA yakanga yakumbira Eisai kuti atore Belviq naBelviq XR pamusika.
Iyo FDA yakazivisa mwedzi wapfuura kuti yaive ongorora zvayedzwa pamushonga unorayirwa, inozivikanwawo seye lorcaserin, mushonga wemuromo wevakuru vanoneta, nekuda kwengozi ingangoita cancer. Sangano racho neChina rakabvunza vanhu kuti vasiye kumwa mushonga.
Vagari vanotya kusvibiswa kunokonzera cancer. Sayenzi haina kuratidza…
Champneys 'yakaudza vaenzi kuti apuro yavo inyunyuti inogona kubatsira kuderedza ...
Ariana Madix chirwere chekenza cheganda chakawedzera nekushaikwa kwe…
"Njodzi inogona kuitika yekenza yakabatana nemushonga inodarika iripo kubatsira kurapwa," Janet Woodcock, director weFDA's Center for Drug Evaluation and Research, vakadaro mukutaura.
Kambani iyi "ichazvipira kubva pamusika uye kurega kutengesa" kweiyo drug muUnited States, Eisai akadaro muchirevo chakatumirwa kuCNN.
Sangano racho rakataura mune imwe nhau kuburitsa kuti miedzo yemakiriniki yakaratidza lorcaserin yakawedzera njodzi yeanoverengeka emakomarara, kusanganisira pancreatic, colorectal nemapapu.
"Sezvacherechedzwa mune itsva Drug Safety Communication yakapihwa nhasi, varwere vanofanirwa kurega kushandisa mushonga Belviq naBelviq XR (lorcaserin) uye vataure nevanoona nezveutano nezvehutano nezveimwe sarudzo dzekurapa nekuda kwekudzora uremu," akadaro Woodcock, achiwedzera kuti vanachiremba vanofanirwa kusiya kuendesa mishonga mishonga yacho.
Iyo FDA haisi kukurudzira chero yakakosha kenza zviongorori kuvanhu vari kutora mushonga wacho kana vangave vakave nawo kare.
Iyo FDA yakatendera lorcaserin muna 2012 uye ikaita kuti mushonga uvepo gore rakatevera, asi yakaenderera mberi nemiedzo yekiriniki pamushonga kuti iongorore njodzi yemwoyo. Pane kudaro, yakawana njodzi yekenza yakawedzera.
Eisai akati ine dudziro yakasiyana yedata kubva mukuedzwa uye achiri kutenda kuti mushonga uyu une "zvakanaka zvinobatsira panjodzi," asi yabvuma kuibvisa zvichibva mukuongororwa kweFDA.
"Eisai anoremekedza danho reFDA uye ari kushanda pamwe chete neArhente padanho rekubvisa," kambani yakadaro muchirevo chakatumirwa kuCNN.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2020/02/13/health/belviq-weight-loss-drug-cancer-fda/index.html
Macron mukwikwidzi anosiya mayya kuda mushure mekubvisa vhidhiyo yehupombwe - xnxx
Champneys 'yakaudza vashanyi kuti chipanje chayo apple chinogona kubatsira kuderedza cancer'
Ariana Madix chirwere chekenza cheganda chakafamba kwenguva nekureba kweinishuwarenzi yehutano
Chemotherapy yekurapa cancer inokurumidza kuve isingachazive nekuda kwemishonga inorwisa mabhakitiriya…